Fitaovana fanamboarana Rim, Oem OTR Fitrandrahana harena ankibon'ny tany, OTR Rim - Hywg
Afaka mamokatra karazan-tsolatra OTR isan-karazany isika, anisan'izany ny sisin'ny 1-PC, 3-PC ary 5-PC. Haben'ny 4 "ka hatramin'ny 63" ho an'ny fitaovana fanamboarana, milina fitrandrahana, forklift ary fiara indostrialy.
Ny vokatra HYWG dia nosedraina tsara sy voaporofon'ny mpanjifa OEM lehibe toa ny Caterpillar, Volvo, John Deere ary XCMG.
OTR Rim singa China OEM mpanamboatra 25 ...
Tabilao indostrialy ho an'ny Boom lift Tele handler China ...
Faritra forklift ho an'i Linde sy BYD China OEM manufa ...
Fitrandrahana harena ankibon'ny tany Sinoa OEM mpanamboatra haben'ny 33 & ...
Fampisehoana ambony Hitachi Ev 5-Pc lafiny peratra - O ...
Mpivarotra ambongadiny tsara 36.00-25 / 1.5 Tranga Otr 5 -...
Hongyuan Wheel Group (HYWG) dia natsangana tamin'ny taona 1996 niaraka tamin'ilay teo alohany toy ny Anyang Hongyuan Steel Co., Ltd (AYHY). HYWG dia mpanamboatra matihanina amin'ny singa rim sy sisiny feno ho an'ny karazana milina ivelan'ny arabe, toy ny fitaovana fananganana, milina fitrandrahana, forklift, fiara indostrialy.
Rehefa afaka 20 taona ny fampandrosoana tsy tapaka, HYWG dia nanjary mpitondra manerantany amin'ny singa rim sy ny tsenan'ny sisiny feno, ny kalitaony dia voaporofon'ny Global Caterpillar OEM, Volvo, John Deere ary XCMG. Androany HYWG dia manana fananana mihoatra ny 100 tapitrisa USD, mpiasa 1100, ivon-toeram-pamokarana 5 manokana ho an'ny OTR 3-PC & 5-PC rim, sisin'ny forklift, sisin'ny indostria ary singa misy sisiny.
HYWG izao no mpamokatra rana OTR lehibe indrindra any Shina, ary mikasa ny ho lasa mpamokatra rigy 3 OTR manerantany.
HYWG dia mamokatra vy roa sy rim feno, mamokatra ny zava-drehetra ao an-trano izahay ho an'ny sisin-tany rehetra ambanin'ny 51 ".
Container Lift rim mahatratra ny sisin'ny stacker ary foana ...
Fitrandrahana harena ankibon'ny tany mpanamboatra China OEM
Fitaovana fanamboarana OTR ho an'ny Loader Wheel ...
36.00-25 / 1.5 Liebherr Otr 3-Pc Rim Ho an'ny Grader, 14.00-25 / 1.5 Liebherr Otr 3-Pc Rim, Peratra lafiny, Key Key, 36.00-25 / 1.5 Liebherr Otr 3-Pc Rim Ho an'ny Hauler voatonona, Flange,